LEI-U | Smart Door Lock Mugadziri
Yakakwira-yekunzwa zvigunwe kuverenga
LEIU akangwara musuwo weminwe yekugunun'una, iine semiconductor yayo, inogara yakagadzirira kukwirisa-uye nekukurumidza kumhanya kucherechedzwa.Recognition kumhanya kwakagadzirirwa kugara pazasi pe0.3s, uye chiyero chekuramba chiri pasi pe0.1%.
Nguva yekufamba nzira
Chengetedza kutonga pamusoro peSmart Lock yako uye tarisa chinzvimbo chero nguva pane yako smartphone. Manage mvumo yekuwana shamwari dzako nevadikani.
Hapana mapassword akabiwa nekuda kweBluetooth
Kuwana kuburikidza neBluetooth kunobvisa chero mukana wekuti password yako iratidzwe kumakamera akavanzika evasingazive.
Uchenjeri huri nyore kupfuura iwe unofunga
Otomatiki bhatani rimwe, rakanakira vana nevakuru. Ruchengetedzo uye kuvimbika zvinosanganisirwa mukugadzirwa kweese mashandiro uye ruzivo.
Iyo LEI-U LVD-06 Smart kukiya inoenderana neAmazon Alexa, google kumba, IFTTT. Inobatanidza 5 kiyi shoma nzira dzekupinda mu1 smart kukiya, Finger Dhinda, Pass kodhi, RFID Kadhi, Emergency Kiyi, Nhare Yekushandisa. Kunyatso kuzivikanwa kweminwe, vhura musuwo mukati memasekonzi 0.3, uye chengetera kusvika pamakumi maviri ezvinyorwa zveminwe.
Kuwanika Lei-u Kune Wako
Leiyu kuvhura "Smart Apartment Chirongwa" yakawana nyore manejimendi yeimba, Kugadziriswa kwemutemo, kugadziriswa hotera / furati / imba yekugara uye matambudziko mazhinji ehupenyu hwekutarisira, zvakare ichipa mhinduro yakasarudzika neimba yekurendesa, yekurenda imba, manejimendi hotera, hofisi yekambani.
Ndeupi musiyano uripo pakati peLeI-U smart kukiya uye mamwe makiyi mumusika?
Chitsva chimiro chakakomberedza chimiro chekiyi, chinokodzera muchanza chevanhu, zviri nyore kubata pamusoro uye kusanganisa ese tekinoroji mabasa.
Isu tinoshandisa hunyowani hutsva hwakafanana nefoni yezvinhu anodised aluminium. Hapana peeling, Hapana ngura, Hapana simbi inorema, Hapana formaldehyde nezvimwe zvinokuvadza zvinhu, Smooth pamusoro ine fashoni kara, Yakachengeteka uye ine hutano. Iyo minwe scanner, iine yayo yega semiconductor, inogara yakagadzirira kukwirira-chaiyo uye kumhanya-kumhanya kunozivikanwa.
Ko kana musuwo usingakwanise kuvhurwa nekiyi smart?
Kana musuwo usingakwanise kuvhurwa nekuwanikwa kweminwe, ndapota tarisa kana zvichikonzerwa nezvikonzero zvinotevera: Kusashanda 1: Ndokumbira usimbise chokurukisa kana chikaisa uye woenda kurudyi ("S"). Misoperation 2: Ndokumbira utarise nechokunze mubato kana iyo waya yakafumurwa panze uye haina kuisa kure mugomba.
* Ndokumbirawo uteedzere mushandisi manyore kana vedio kuisa smart smart, usaise nekufungidzira.
Chii chinoitika kana mabhatiri eiyi smart akiyenda akapfava?
Iyo LEI-U Smart Lock inoshanda nemana akajairwa AA mabhatiri. Pakangoti nhanho yekuchaja bhatiri inodonha pazasi pe10%, iyo LEI-U smart kukiya inokuzivisa iwe nekukurumidza toni uye une nguva yakakwana yekuchinja mabhatiri. Kunze kwezvo, LEI-U nyowani vhezheni inowedzera USB yechimbichimbi simba chiteshi uye zvakare unogona kushandisa kiyi yako kukiya / kuvhura .Avhareji hupenyu hwebhatiri hwakatenderedza mwedzi gumi nemaviri. Simba rako re Smart Lock rinoenderana nekuwanda kwekukiya / zviito zvekuzarura uye kurerukirwa kwekugadzirisa kwekiyi. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve mabhatiri pano.
Tumira chigadzirwa chako kuLeIU
Pamhepo kana parunhare, isu ticharonga kutumira kwechigadzirwa chako kuLeIU Dhipatimendi Rekugadzirisa - zvese pane yako purogiramu. Iri sevhisi rinowanikwa kune akawanda maLEIU zvigadzirwa.
Ndinogona here kuvhura musuwo uri kure ndichishandisa iyo App?
Ehe, Ingo batanidza negedhi.
LEI-U Smart ndiyo nyowani mhando yemutsara weLeiyu akangwara uye yakagadzwa muna 2006, iri muNha. 8 Lemon Road, Ouhai Economic Development Zone, Wenzhou Guta, Zhejiang China.Leiyu chigadziko chekugadzira muTaishun inova nyanzvi yekugadzira makiyi, iyo fekitori yekugadzira inovhara nharaunda inosvika 12,249 mativi emamirimita, akapoterera vashandi vechi150.Chigadzirwa chikuru chinosanganisira chakangwara chihuri, mechina yekuvhara, musu uye hwindo Hardware accessories.
Kubva 2013. LEI-U kubatana naVanke uye ndokuva Vanke's A-level mutengesi, ichipa 800,000 seti yeVanke Group kukiya gore rega, uye yakavaka hukama hwakareba.
LEI-U inopa ODM masevhisi eanopfuura mazana mashanu emakambani ekiyeki indasitiri, inovhara mazhinji evazhinji varidzi vezvigadzirwa zvepasirese pasirese.
LEI-U Smart Imba Chirongwa
Yakabudirira nyore manejimendi yeimba, Kugadziriswa kwemutemo, kugadziriswa kwehotera / furati / kugara pamba uye matambudziko mazhinji ehupenyu